Lixabiso Electroplated aluminium ingxubevange ngomshini iindawo mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
IAluminiyam ingxubevange yeyona nto isetyenzisiweyo ngaphandle kwesinyithi kwimathiriyeli eyakhiweyo kwishishini, kwaye isetyenziswe ngokubanzi kwezokubhabha, i-aerospace, imoto, ukuvelisa oomatshini, ukwakha iinqanawa kunye namashishini amachiza. Ingxubevange yeAluminiyam inokuchongwa ngombane.
Aluminium ingxubevange electroplating iindawo ngomshini
Ukufakelwa kombane kwahlulwe kwayingxobo yokubeka, ukugoba komgqomo, ukuqhubeka kwesingxobo kunye nebrashi, ezihambelana ikakhulu nobungakanani kunye nebhetshi yamacandelo aza kutyatyekwa. Ukubeka ipakethi kufanelekile kwiimveliso zobungakanani ngokubanzi, ezinje ngee-bumpers zeemoto, ii-handlebars zebhayisikile, njl.Iingqayi ze-Barrel zilungele iinxalenye ezincinci, izinto zokubopha, iiwasher, izikhonkwane, njl njl. Ukuqhubeka okuqhubekayo kufanelekile kwiingcingo kunye nemicu. Ukucoca ibrashi kufanelekile ukucwangciswa ngokukhethekileyo okanye ukulungiswa.
Isisombululo se-electroplating sibandakanya i-asidi, i-alkaline, kunye nezisombululo ze-asidi kunye nokungathathi hlangothi ngomxube we-chromium. Nokuba yeyiphi na indlela yokutyabeka esetyenzisiweyo, iitanki zesingxobo kunye neendawo zokuxhoma ekunxibelelaneni neemveliso ekufuneka zityatyekwe kwaye isisombululo sokuxhoma kufuneka sibe nenqanaba elithile lokungafani.
Ouzhan aluminium ingxubevange electroplating nickel nesingxobo ukubonisa:
Umgaqo we-aluminium alloy plating
Ukufakelwa kombane kufuna umbane ophantsi okhoyo ngoku kwitanki yombane kunye nesixhobo se-electrolytic esenziwe ngesisombululo se-electroplating, iinxalenye ekufuneka zitywinwe (i-cathode) kunye ne-anode. Ukubunjwa kwesisombululo se-electroplating kuyahluka ngokuxhomekeke kumaleko wesingxobo, kodwa zonke ziqulathe ityuwa ephambili ebonelela nge-ion zentsimbi, iarhente yokuntsonkotha enokwenza ii-ion zentsimbi kwityuwa ephambili yenze i-complex, i-buffer esetyenziselwa ukuzinzisa i-pH isisombululo, isilumeki esinamandla, kunye nezongezo ezizodwa.
Inkqubo yokwenza i-electroplating yinkqubo apho i-ion yesinyithi kwisisombululo sokucoca iyancitshiswa ibe yi-athomu zetsimbi ngokusebenzisa i-electrode reaction phantsi kwentshukumo yombane wangaphandle wombane, kwaye isinyithi sifakwe kwi-cathode. Ke ngoko, le yinkqubo yesinyithi yokubumba equka ukuhanjiswa kobunzima besigaba solwelo, ukusabela kwe-electrochemical kunye ne-electrocrystallization.
Kwitanki yesingxobo esiqulathe isisombululo sokwenza i-electroplating, iindawo ezicociweyo nezenziwe kwangaphambili ukuba zityatyekwe zisetyenziswa njenge-cathode, kwaye i-anode yenziwe ngentsimbi, kwaye iipali zombini zidityaniswe ngokulandelelana kunye nee-electrode ezilungileyo nezingalunganga zamandla e-DC unikezelo. Isisombululo se-electroplating senziwe ngesisombululo esinamandla esinezixhobo ezenziwe ngetsimbi, i-salts, i-buffers, i-pH kunye ne-additives.
Emva kokufumana amandla, ii-ion zentsimbi kwisisombululo se-electroplating ziya kwi-cathode phantsi kwesenzo somahluko onokubakho ukwenza umaleko wesingxobo. Isinyithi se-anode senza ion zentsimbi kwisisombululo se-electroplating ukugcina uxinzelelo lwe-ion zentsimbi ukuba zityatyekwe. Ngamanye amaxesha, njenge chromium plating, i-anode enganyibilikiyo eyenziwe yelothe kunye ne-lead-antimony alloy isetyenziswa, esebenza kuphela ukuhambisa ii-elektron kunye nokuziphatha okwangoku.
Uxinzelelo lwe-chromium ions kwi-electrolyte kufuneka igcinwe ngokudibanisa rhoqo i-chromium compounds kwisisombululo sokulamba. Ngexesha le-electroplating, umgangatho wezinto ze-anode, ukwakheka kwesisombululo se-electroplating, iqondo lobushushu, uxinano lwangoku, amandla-exesha, ukuvuselela ubungqongqo, ukungcola okwenziweyo, ifom yamandla, njl. Njl. Iya kuchaphazela umgangatho wengubo kwaye kufuneka ilawulwe ngexesha elifanelekileyo.
Kwi-electroplating, i-materal ukuba ifakelwe isetyenziswe njenge-cathode, into efanayo yensimbi njengoko isinyithi esisetyenzisiweyo isetyenziswa njenge-anode (i-anodes ezingenayo i-insoluble nayo iyasetyenziswa), kwaye i-electrolyte isisombululo esine-ion zentsimbi; Okwangoku igalelo phakathi kwe-anode kunye ne-cathode.
Ukusetyenziswa I-Aerospace, ukwakhiwa kweenqanawa, ulwakhiwo, irediyetha, ezothutho, ukuqhubekeka kwezixhobo zoomatshini, izixhobo zonyango kunye neemfuno zemihla ngemihla
Egqithileyo Drawing aluminium ingxubevange iinxalenye extruded
Okulandelayo: Ingcango yealuminiyam ecoliweyo kunye neefestile zokwenza iifestile